October 7, 2014 – democracy for burma
#THAI #MYANMAR #MAT #7.10. # နေ့လည် ၃ နာရီခန့်က အလုပ်လုပ်ရင်း စက်ထဲညှပ်ပါသွား၍ သေဆုံးနေပုံပါ။
On October 7, 2014 By Burma Myanmar newsIn Burma, ThailandLeaveacomment
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် ဘန်ဖီမြို့ ထေဖရပ်လမ်းမ ထိုင်ပကန်ရပ်ကွက်ရှိ အုန်းသီးရုံတွင် အလုပ်လုပ်နေသော ကျောင်းသားအရွယ် ၁၆ နှစ်ခန့် (ပဲခူးတိုင်းဒေသမှဟု ပြောနေကြသည်)
7.10.2014 နေ့လည် ၃ နာရီခန့်က အလုပ်လုပ်ရင်း စက်ထဲညှပ်ပါသွား၍ သေဆုံးနေပုံပါ။
အလုပ်ရှင်မှ ပုလိပ်နဲ့ညှိနှိုင်ပြီးအမှုပိတ်လိုက်ပါသည်။ သေဆုံးသူအတွက် လျော်ကြေးငွေ
ဘတ်80000 Bhatပဲ လျှော်ပေးပါသည်။
လက်ရှိ MATအဖွဲ့မှ အမှုစစ် ကို Ba Khetမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
155/1 Moo 1 TheParak Road.
Tel : (662) 315-4171-6
Fax : (662) 315-4169, (662) 315-4188
by အဘ ကိုဖြိုး သစ်ဆန်း
#THAI #POLICE #pick #Rohingya” #muslims #translator for #Rakhine #suspects?
On October 7, 2014 October 7, 2014 By Burma Myanmar newsIn Asean, Burma, ThailandLeaveacomment
Dear Media around the world.
Please ask Mr. Somyod the following Questions:
1. Why did he picka“Rohingya” muslims translator for Rakhine suspects?
2. Why did the police pickaRoti Street Vendor as an official translator translator? Was he trying to save some Thai tax payers’ money?
MAYBE YOU ALL READ ABOUT THE PROBLEMS WE CALL THEM “BENGALI” (ROHINGYA) WITH BUDDHISTS FROM RAKHINE ARAKAN STATE.
ANOTHER POINT IS THAT OUR EMBASSY OFFICIALS FEEL “SATISFIED” WITH THAI OFFICILAS EXPLANATION! THEY NEVER TOOK CARE OF THE PEOPLE.
#Htoo #Foundation #Breaking #News #RESCUE #HELI
On October 7, 2014 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ပျောက်ဆုံးတောင်တက်သမားနှစ်ဦးကို ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်စဉ် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်သွားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ B4 ရဟတ်ယာဉ်နှင့် ယနေ့ ပြန်လည် အဆက်အသွယ် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ပျောက်ဆုံးရဟတ်ယာဉ်တွင် လိုက်ပါခဲ့သူ (၃)ဦး စလုံး အသက်ရှင်ကြောင်းလည်း ၀မ်းသာဖွယ် သတင်းရရှိသည်။
ထူးဖောင်ဒေးရှင်း နာယက ဦးတေဇသည် အဆိုပါ သတင်းရရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ပူတာအိုမြို့မှ B3 ကယ်ဆယ်ရေး ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် အဆက်အသွယ် ရရှိခဲ့သည့် လန်ခါးကျေးရွာသို့ ချက်ချင်း သွားရောက်ခဲ့သည်။
ယခု ညနေ ၅း၀၀ နာရီခန့်တွင် ဦးတေဇသည် လန်ခါးကျေးရွာ၌ ထိုင်းရဟတ်ယာဉ်မှူး၊ မြန်မာရဟတ်ယာဉ်မှူးနှင့် ဦးရွှေရင်တော်ကြီးတို့ကို တွေ့ဆုံပြီး လိုအပ်သည့် ဆေးဝါး ကုသမှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
အသေးစိတ်သတင်းများကို ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားပါမည်။
!!! တောက်!!!! #ဒီသတင်းကို ဒီမနက်ဖတ်ရတော့ တောက် ခေါက်ဘို့တောင် အားမရှိလောက်အောင် ရင်နာတယ်။
On October 7, 2014 October 10, 2014 By Burma Myanmar newsIn Burma, ThailandLeaveacomment
မန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က
မှန်ကန်တဲ့ ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး
သန့်် ရှင်းပြီး တရားမျှတ တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ
လိုအပ်တယ်လို့ထိုင်ဝန်ကြီးချုပ် ကို တောင်းဆို
ဒီသတင်းကို ဒီမနက်ဖတ်ရတော့ တောက် ခေါက်ဘို့တောင် အားမရှိလောက်အောင် ရင်နာတယ်။
ထိုင်းအစိုးရက မြန်မာ အလုပ်သမားတွေကို အနိုင်ကျင့် ရဲမှာပေါ့။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေ တောင် အဲ့သလို ခေါင်းပုတ် ခြေပုတ် စော်ကားခံရတာ။
ကဲ ဆရာကြီးဦးသိန်းနိုင်တို့ နဲ့ တကွ သံအရာရှိများ ခင်ဗျားတို့ အဲ့နေ့ တကယ်ဘဲ စစ်ဆေးမှု တွေ သူတို့ရှင်းပြတာတွေကို ကျေနပ်မှု ရှိတာ အမှန်ပဲလား။ အမှန်ပဲဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ကို သူတို့ ကျနော်ပြောတဲ့ ဒုတိယမြောက် နဲ့ ထိုးလိုက်တာပေါ့။ ခင်ဗျားတို့မှာ အစာအ်ိမ်၂ လုံးအပိုမပါဘူး။ လူဆိုတာ ငွေနဲ့ တခုတည်း နဲ့ အသက်ရှင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အရှက် သိက္ခာနဲ့ အသက်ရှင်နေတာ။
ခင်ဗျားတို့ ဒီနေ့သတင်းမှာပါတဲ့အတိုင်း satisfied (ကျေနပ်သည်။ အားရသည်) ဖြစ်တယ် ဆိုတာ မဟုတ်ရင် ဒီနေ့ပဲ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေနဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါ။
မဟုတ်ရင် ခင်ဗျားတို့ ထိုင်းသူဌေးတွေဆီက လာဘတ်စားလိုက်ပြီလို့ ကျုပ် တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက စွပ်ဆွဲမယ်။
(သတင်းတွင်.ရဲအရာရှိပြောသော စကား များမှာ…
“.မြန်မာသံအရာရှိတွေနဲ့ မီဒီယာတွေဟာ ကျနော်တို့ ရှင်းပြတာကို ကျေနပ်ကြတယ် ။ သူတို့မေးသမျှမေးခွန်းအားလုံး ကိုလည်း ဖြေဆိုခဲ့ပေးပါတယ်။ သူတို့လည်း ကျေနပ်သွားကြပါတယ်။ အမှု ဖြစ်စဉ်အားလုံးကို ပွင့်လင်းမြင်သာအောင် လုပ်ခဲ့ပြီး မှားယွင်းတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး ။ လူကို ရိုက်ပြီး စစ်ဆေး တယ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ၂၀၁၄ မီဒီယာတွေ ခေတ်စားချိန်မှာ ကျနော်တို့ဟာ scapegoat (ဒါးစားခံ) ရှာဘို့ ဖန်တီးတယ် ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။”………လို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောသွားပါတယ်။
ထိုင်းလူ့အခွင့်ရေးကောင်စီက Surapong Kongchantuk ကတော့ တရာခံ ၂ ယောက်နဲ့ သက်သေ တွေဟာ လူ့အခွင့်ရေးအချိုးဖောက်ခံရလားဆိုတာကို စစ်ဆေးသွားမှုာဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေ သည်ဒီလူသတ်မှုကို သေချာ မကိုင်တွယ်ရင် ထိုင်းနဲ့အင်္ဂလန်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ် ( ထိုင်း မြန်မာဆက်ဆံရေး မပါဘူးနော်)
ထိုင်းရဲကတော့ လူသတ်တရားခံကို မိပြီ ဆိုပေမယ့်လည်း သေဆုံးသူ ရဲ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက ကျေနပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး)… >>
True comment I have to say. They dare to bully their own people only …. always .. always … Look at the international foreign policy. Always fail to protect their own Burmese citizens.
On October 7, 2014 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
LINE แบนสติ๊กเกอร์”ควายแดง” หรือ “Red Buffalo” โดยให้เหตุผลว่าเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม กลุ่มบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
Redshirt ‘Mascot’ Removed From LINE Sticker Store .According to the creator, LINE said they have the right to remove any “Stickers that may slander, injure, or attack the reputation ofaparticular person, nationality, oragroup.”